New Day Jobs | How To Create Successful Mindset | Career Blogs
Personal Upgrade 07 Jul 2020
အောင်မြင်တဲ့ စိတ်နေသဘောထားမျိုးရအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? ကိုယ်က အောင်မြင်တဲ့ စိတ်နေသဘောထားမျိုးရအောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီလို လုပ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတချို့ကို မနေ့သစ်က ပြောပြပေးပါမယ်။
၁။ ကိုယ့်ကို စိတ်အားထက်သန်စေတဲ့အရာကို ရှာဖွေပါ
လူတိုင်းမှာ ကိုယ့်ကို စိတ်အားထက်သန်စေတဲ့အရာတွေရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီ စိတ်အားထက်သန်မှုတွေက ကိုယ့်ရဲ့ ပန်းတိုင်တွေကို ရောက်အောင်လျှောက်လှမ်းနိုင်ပြီး အရှုံးတွေကိုလည်း လက်မလျှော့ပဲ ရင်ဆိုင်နိုင်သွားပါတယ်️။ အရင်ဦးဆုံး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်လည် စမ်းစစ်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှုကဘာလဲဆိုတာကို ရှာဖွေလိုက်ပါ။ ပြီးသွားရင် အဲ့ဒီအတိုင်းလုပ်ဆောင်လိုက်ပါ။
ကိုယ်က တစ်ခုခုလုပ်ကိုင်နေရင်းနဲ့ မလုပ်နိုင်လောက်ဘူးလို့ တွေးမိတာမျိုးရှိတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါ ကိုယ်က လုပ်နိုင်တယ်ဆိုပြီး အကောင်းဘက်ကနေ လှည့်တွေးလိုက်ပါ။ အဲ့ဒီလိုတွေးဖို့ မဖြစ်နိုင်လောက်ဘူးလို့ထင်မိပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီလိုလေးတွေးကြည့်လိုက်ပါ။ အဲ့ဒါဆိုရင် ကိုယ်က လုပ်ချင်စိတ်ကလေးတွေဖြစ်လာပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်း ယုံကြည်မှုရှိလာပါလိမ့်မယ်။
ပြုံးတာက စိတ်ဖိစီးမှုကို လျှော့ချနိုင်ပြီး ကောင်းတဲ့ဘက်ကနေတွေးမြင်နိုင်တယ်ဆိုတာကို သူငယ်ချင်းတို့တွေသိပါသလား? ပြုံးတာက ယုံကြည်မှုလျော့နည်းတာအတွက် ဆေးတစ်ခွက်ပါပဲ။ ကိုယ်က ပြုံးနေရင် အကောင်းဘက်ကနေ တွေးတတ်လာပြီး ကိုယ့်အနီးအနားကလူတွေကလည်း အကောင်းမြင်လာပါလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ ကိုယ်က စစချင်းမှာ တမင်လုပ်ပြုံးမှရတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း များများပြုံးလိုက်ပါ။ ပြုံးတာက ကြောက်တာတွေ စိတ်ပူပင်မှုတွေ မျှော်လင့်ချက် ပျောက်ဆုံးနေတာတွေကို အနိုင်ယူသွားနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာက ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းပါတယ်။ ကိုယ်က အားကစားပုံမှန်လုပ်ဖြစ်တော့ စိတ်လည်းကြည်လင်ပြီး အကောင်းဘက်ကနေ ပိုတွေးခေါ်နိုင်တယ်လေ။ စိတ်ကြည်ပြီး အကောင်းဘက်ကနေ တွေးခေါ်နိုင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ်က ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ချက် ခိုင်ခိုင်မာမာချနိုင်သွားမယ်လေ။
၅။ စကားမပြောခင် သေချာစဉ်းစားပါ
စကားပြောတဲ့အခါ သုံးတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေက အရမ်းကို အရေးကြီးသလို အစွမ်းလည်း ထက်ပါတယ်။ စကားလေးတစ်ခွန်းကြောင့်နဲ့ ဘဝကြီးတောင် ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်က အကြံဉာဏ်တွေ ထင်မြင်ချက်တွေပြောတော့မယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံးအဆိုးဘက်က တွေးတာတွေကို ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ ကိုယ် စမပြောခင်မှာ ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာကို အရင်စဉ်းစားလိုက်ပါ။ ပြီးတော့ အကောင်းဘက်ကနေပြောတာမျိုးဖြစ်အောင် လုပ်ပါ။